कती कमाउछन नेपाली कलाकारहरुले ? – Contemporary News Portal From Nepal
कती कमाउछन नेपाली कलाकारहरुले ?
प्रकाशित मिति: ११ पुष २०७३, सोमबार १७:३३
नायिका नीता ढुंगानाले पहिलो चलचित्र ‘दबाब’मा ७० हजार पाएकी थिइन् भने ‘नोटबुक’बाट ‘गालारातै गर्ल’ का रूपमा चर्चामा आएपछि उनको पारिश्रमिक ३ लाख पुगेको छ । नायिका नम्रता श्रेष्ठ धेरै पारिश्रमिक लिने नायिकामा पर्छिन् । नम्रताले पहिलो चलचित्र ‘सानो संसार’ मै पनि १ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक लिएकी थिइन् भने हालै घोषणा भएको चलचित्र ‘पर्व’का लागि ७ लाख पारिश्रमिक लिन लागेको बताइन्छ ।
कलाकारहरूले कर तिरेका छन्
चूणमणि शर्मा महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
नेपालमा कलाकारले तिर्ने कर भनेर छुट्याइएको छैन । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो आयअनुसार तिरेको पाइन्छ । धेरैजसो घटनामा पारिश्रमिक दिनेहरूले नै कर कटाएर पारिश्रमिक दिन्छन् । यदि कलाकारले अन्य व्यवसाय गरेर कमाएको सम्पत्ति छ भने उसले आय व्ययको हिसाबअनुरूप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा कसैले वर्षमा ३ लाखसम्म आम्दानी गर्छ भने उसले सामाजिक सुरक्षा करस्वरूप १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसभन्दा बढी भए पहिलो १ लाखको १५ प्रतिशतका आधारमा र त्यसभन्दा माथिको कमाइमा २५ प्रतिशतका आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि वार्षिक २० लाखभन्दा माथिको कारोबार हुन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्छ । नेपालमा कतिपय कलाकारले आफ्नो व्यक्तिगत आम्दानीका आधारमा कर तिर्दै आएका छन् भने कतिपयले छुट्टै फर्म बनाएर पनि कर तिरेको पाइन्छ ।
पहिलो चलचित्र हिरो : १३ हजार
देउता : २ लाख
हिरो : १ लाख २५ हजार
बागमती : ५ लाख
पहिलो चलचित्र पिंजडा : डेढ लाख (डबिङ नगरेकाले १५ हजार घटाइएको)
परिचय : १० लाख
अहिले : १२ लाख
बजारमा चलेको : १२ लाख
पहिलो चलचित्र किस्मत : २० हजार
सानो संसार : २ लाख ५० हजार
लज्जा : २ लाख
नोभेम्बर रेन : ८ लाख
पहिलो चलचित्र हिरो : २१ हजार
अन्दाज र रावण : १ लाख २५ हजार
हिरो रिटन्र्स : ५ लाख
पहिलो चलचित्र होस्टेल : १ लाख ७५ हजार
जेरी : ५ लाखभन्दा माथि
गाजलु : ८ लाख
कृ : २० लाख
पहिलो चलचित्र दासढुंगा : ३० हजार
लुट : ५० हजार
कबड्डी/कबड्डी–कबड्डी : सेयरमा
लुट टु : ६ लाखभन्दा माथि
संरक्षण : ५ लाख
पहिलो चलचित्र मेरो बेष्टफ्रेन्ड : १ लाख २० हजार
नाइँ नभन्नु ल २ र ३ : ३ लाख
छक्का पञ्जा : ३ लाख
सुन्तली, ह्याप्पी डेज, माला : ४ लाख
पहिलो चलचित्र स्वर : १ लाख
महसुस : २ लाख
बाग्मती : ४ लाख
लभसासा, ऐश्वर्य, घामपानी : ३/३ लाख
जानकार स्रोतका आधारमा
११ पुष २०७३, सोमबार १७:३३ मा प्रकाशित